Amehlo atyheli weengwenya, impumelelo yomhleli ka-2006 | Uncwadi lwangoku
Amehlo amthubi weengwenya
Amehlo amthubi weengwenya (2006) yinoveli ethengwa Isuka kumbhali waseFrance, intatheli kunye notitshala uKatherine Pancol. Kwelinye icala, le ncwadi sisiqendu sokuqala setrilogy engaziwa ukuba iyaqhubeka I-waltz ehamba kancinci yee-turtles (2008) kunye I-Central Park squirrels zibuhlungu ngeMivulo (2010).
Ukongeza, impumelelo enkulu yokuhlela ye I-Les Yeux Jaunes des Iingwenya -Igama lokuqala lesiFrentshi- lenze ukuba iPancol yaziwe kwilizwe jikelele. Inyaniso, esi sihloko sifunyenwe, phakathi kwabanye, iMaison de la Presse Award. Kwangokunjalo, ibali lakhe laziswa kwiscreen esikhulu kwi-2014 phantsi kolawulo lukaCécile Talerman; Kudlala u-Emmanuelle Béart noJulie Depardieu.
1 Isishwankathelo saMaziso aMthubi weeNgwenya, nguKatherine Pancol
1.2 Abalinganiswa besekondari
1.3 Inqaku le-inflection
2.3 Ingqikelelo yomsebenzi
2.3.2 Umlinganiswa ophambili osekwe kumlinganiswa wokwenene
2.4 Ukuzalwa kwetrilogy
3 Malunga nombhali, uKatherine Pancol
3.1 Ubomi bonke bunxibelelene neeleta kunye nobuntatheli
3.2 Iincwadi zikaKatherine Pancol
Isishwankathelo se Amehlo amthubi weengwenyanguKatherine Pancol
UJosephine ngumfazi oneminyaka engama-40 ubudala ohlala eParis nomyeni wakhe uAntoine kunye neentombi zabo ezimbini, uHortense noZoe. Ekuqaleni, Ngaphandle kokungaphumeleli komtshato wakhe, akakwazi ukwenza isigqibo esigqibeleleyo ngenxa yokungaqiniseki. Ngayiphi na imeko, ukwahlukana akunakuphepheka, kuba umyeni wakhe unobuso obuhlungu emva kokugxothwa kwindawo yokugcina izixhobo apho wayesebenza khona.
Ngolunye ulwazi, UAntoine ebekwimeko enjalo unyaka kwaye, endaweni yokuzishukumisa, uqala ukungathembeki emfazini wakhe. Emva koko kuza ingxoxo yokugqibela kunye nokwahlukana okunengqiqo. Ukusukela ngalo mzuzu ukuya phambili, kuthotho lweziganeko ezithile ze-surreal kunye nokunxibelelana kukhutshwa. Omnye wabo ngumsebenzi owenziwa nguAntoine eAfrika njengomphathi wefama yengwenya.
Ezinye izehlo ezingaqhelekanga zibandakanya abalinganiswa besibini. Okokuqala: I-Shirley eyimimangaliso, ummelwane okhethekileyo; Okwesibini: Umama kaJosephine obandayo uHenriette. Le yokugqibela yatshata umakhulu Marcel Gorsz kumtshato wesibini, owamvumela ukuba abenobomi obumnandi awayehlala efuna.
Ikhosi yeziganeko ithatha utshintsho olukhulu xa u-Iris, Udade kaJosephine onomtsalane, Ubanga ukuba ubhale inoveli, nangona kunjalo, kuyaxoka. Ngaphezu koko, ukhetha ukugcina inkohliso kude kube sekupheleni, ukuya kwinqanaba lokuba acele udadewabo ukuba abhale isicatshulwa. Nangona uJosephine engaluthandi olu luvo, ekugqibeleni uyavuma ukuyila isicatshulwa endaweni yokufumana uninzi lwemali (kunye nokuhlawula amatyala akhe).
Abanye Kwiinyanga kamva incwadi ibonakala ipapashiwe, umxholo wayo usekwe kububanzi Ulwazi lwembali nguJosephine malunga nenkulungwane ye-XNUMX. Ukuqaliswa kwaba yimpumelelo yokuhlela; Iris ufumana lonke udumo; UJosephine, umvuzo. Nangona kunjalo, abahlobo bembali-mbali bakrokrela ukuba nguye umbhali wencwadi kwaye le nto iphela ichaphazela ubudlelwane phakathi koodade.
Amehlo Amthubi ...
Isakhiwo siqulathe iimeko ezijikeleze ubomi bemihla ngemihla yamadoda nabafazi abaqhelekileyo kwisixeko esinjengeParis. Pha, Amalungu ababhinqileyo ebali abonakalisa (nganye ngendlela yabo) iminqweno yabo engazalisekanga embindini webali eligcwele ubuxoki. Kodwa ayizizo zonke iinyembezi kunye nokudana, kukho igumbi lothando, ukuhleka namaphupha.
I-Les Yeux Jaunes des Iingwenya Yincwadi egcwele iisimboli ezininzi. Ukuqalisa, Amehlo atyheli ezirhubuluzi abonisa iintlobo zoloyiko: ukufa, ubomi, ukuba nguwe, ukulahleka, ukunyaniseka ... Bonke abalinganiswa bayoyika ngento ethile.
Ngokufanayo, iPancol ithelekisa iimpawu zabalinganiswa bayo ngenxa yokoyika. Umzekelo: UHenriette Gorsz akoyiki kwanto, kuphela ukungabi nemali eyaneleyo. Ngokuhambelana, uyayicekisa intombi yakhe encinci, uJosephine, onolwazelelelo nesisa. Endaweni yokuba intombi yakhe endala, u-Iris, adlulisele kuHenriette (umfanekiso) wayo yonke into ayithandayo: amandla kunye namandla.
UKatherine Pancol ucacisa njani Beka ibali lakhe ngexesha lodliwanondlebe olunikezwe ngo-2015 nguSophie Mason wase-Australia Iintsiba zomlilod. Emva koko, umbhali ongumFrentshi wakhankanya ibinzana likaIsak Dinesen elifundeka ngolu hlobo:
Amehlo amthubi weengwenya ubungqina bemixholo eyahlukeneyo kunye nezimbo ezifundwe nguKatherine Pancol ukusukela ebuntwaneni. Ewe, Kudliwanondlebe olwahlukeneyo ubanga ukuba uyakonwabela ukufunda amabali eentsomi zase-Egypt, Arabhu nase Scandinavia. Ngokufanayo, umbhali ongumFrentshi wakhankanya Abazalwana bakaKaramazov (UDostoevsky), Le Perere Goriot (Balzac), kunye noDavid Copperfield.
Umlinganiswa ophambili osekwe kumlinganiswa wokwenene
I-Pancol icacisele uMason ukuba umlinganiswa ophambili usekwe kumntu wokwenyani. “Saye sathetha, wayenembonakalo yakudala, enomtsalane kancinci kwaye njengoko ndandimamele, ndaziva ndinoluvo luqhelekileyo! UJosephine wayesele eza kuzalwa ”. Ngala mazwi, umbhali ongumFrentshi wachaza umphandi awadibana naye kunxweme lwaseNormandy.
Kwakhona, I-Pancol ikhankanye ukuba umphandi we-CNRS (IZiko leLizwe loPhando lwezeNzululwazi- isifinyezo sesiFrentshi) ibijolise kwisifundo esinye iminyaka engama-30: Abathengisi bamaphephandaba okuhamba ngenkulungwane ye-XNUMX eFrance. Ukususela ngelo xesha ukuya phambili, umbhali waphuhlisa umhlaba ojikeleze uJosephine, ongafaniyo nomlinganiswa wokwenyani, ohlalutya abalinganiswa bekhulu le-XNUMX.
Ekuqaleni, umbhali weGallic akazange acinge ngokuphuhlisa i-trilogy. Nangona kunjalo, Ekupheleni kwencwadi yokuqala, iPancol yaqhubeka nokucinga ngabalinganiswa ... "Kwenzeka ntoni ebomini babo? Ngaba wawukhathazekile okanye wonwabile? Ngale ndlela, izavenge ezibini ezilandelelanayo zavela apho iimbono ezahlukeneyo zabanye abalinganiswa zivezwa.
Malunga nombhali, uKatherine Pancol
Wazalwa ngo-Okthobha 22, 1954, eCasablanca, eMorocco; Ngelo xesha esi sixeko sasiseyinxalenye yomkhuseli waseFrance. Xa wayeneminyaka emihlanu, uKatherine omncinci wafudukela eParis kunye nosapho. Kamva, Ngexesha lobutsha bakhe, waqeqeshelwa ukuba ngutitshala waseFransi nesiLatin.
Ubomi bonke bunxibelelene neeleta kunye nobuntatheli
Phakathi kwiminyaka yama-70, UPancol wagqiba ubugqirha bakhe kwiileta zale mihla kwiYunivesithi yaseNanterre kwaye waqala umsebenzi wakhe wobuntatheli. Emva kokupapasha inoveli yakhe yokuqala, Moi d'abord (Ndiqala, 1979) wafudukela eNew York. Apho, wabhalisa kwiYunivesithi yaseColumbia ukuba athathe ikhosi yokubhala yoyilo aze aqhubeke nokusebenza eyunivesithi.
Ukuqala ngo-1981, umbhali ongumFrentshi waqala ukusebenza njengomhleli novelas nanjengombhali wamaphephancwadi Elle y Umdlalo weParis. Kumajelo eendaba sele ekhankanyiwe, wafumana ukungaziwayo ngenxa yesitayile sodliwanondlebe. Ngelixa kwi-Big Apple, uKatherine Pancol watshata kwaye wayenabantwana ababini (owasetyhini kunye nendoda). Okwangoku uqhawule umtshato kwaye uhlala eParis.
Iincwadi zikaKatherine Pancol
Eugene & Moi (2020) yincwadi yamashumi amabini anesibini etyikitywe nguPancol, oxabisa ikhondo loncwadi oluthathe amashumi amane eminyaka. Lugqatso olwaqala ngo-2006 ngenxa yokuphehlelelwa Amehlo amthubi weengwenya. Akumangalisi ke ukuba lo mbhalo uguqulelwe phantse kwiilwimi ezilishumi elinesibini; phakathi kwabo: amaTshayina, amaKorea, amaTaliyane, amaPolish, amaRashiya, amaUkraine kunye neVietnam.
Ngaphandle kwezo zikhankanyiweyo Moi d'abord, I-Les Yeux Jaunes des Iingwenya y U-Eugène kunye noMoiUluhlu lweencwadi zePancol lugqityiwe zezi zihloko zilandelayo:
Umphambukeli (IBarbare, 1981)
Ngqombela nceda (Scarlett, ewe kunokwenzeka, 1985)
Amadoda akhohlakeleyo ahamba ezitratweni (Les hommes cruel ne circulant pas les rues, 1990)
Ukusuka ngaphandle (Vu de l'extérieur(Seuil, 1993)
Lo mfanekiso mhle: UJackie Kennedy (Ngo-1929-1994) (Un umfanekiso womfanekiso, Amanqaku aphinde akhutshwa, 1994)
Omnye umdaniso (Encore une danse, 1998)
Etter monter ngokucacileyo dans unense amour ... (2001)
Indoda ekude (Un homme à umgama, 2002)
Ndibambe: ubomi ngumnqweno (Embrassez-moi, 2003)
I-waltz ehamba kancinci yee-turtles (ILa Valse Lente des Tortues, 2008)
I-Central Park squirrels zibuhlungu ngeMivulo (Les écureuils de Central Park zibuhlungu, 2010)
Amantombazana [Isiqendu 1: Umdaniso emini] (2014)
Amantombazana 2 [Isiqendu 2: Inyathelo nje elinye kude nolonwabo] (2014).
Amantombazana 3 [Isiqendu 1: Yiza ebomini] (2014)
Amanga amathathu (Iibheyisi zeTrois, 2017)
Irhorho yebhedi (2019)
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » Inoveli » Amehlo amthubi weengwenya